Ngiphelile elithi "isehlukaniso" engena engqondweni, lapho kungaqedwa le ukukhohlisa zokugcina mayelana "ngenjabulo unomphela ...". Yebo, umshado - akusiyo kuphela uthando kanye amajuba. Njengoba ulandela kusukela izibalo sad, okwamanje inani labantu abahlukanisayo kuholele US neRussia ngokuzethemba. Nokho, isehlukaniso - akusiwona njalo into embi. Ngezinye izikhathi injabulo siqu, ngasizathu simbe, awutholakali emshadweni olulodwa. Ezimweni ezinjalo kubalulekile ukwazi ukuthi unquma ukufaka isehlukaniso, ngoba ukubeka konke ukuphila kwakhe e-altare lomhlatshelo - hhayi ngendlela enengqondo kakhulu aphume nesimo esinzima.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isehlukaniso sidalwa akuvamile labetibambile kokuba kungokuvumelana. Ngokuvamile kuyinqubo kunalokho ezingemnandi ukuthi luyindida kakhulu futhi isikhathi eside, uma kunezingane ehlanganyelwe noma owakwakhe kunomehluko ne ukuhlukaniswa kwempahla. Ithemba ukudabula yonke le sivimbele abantu abaningi abangakwazi ukuhlala washada eside, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi unquma ukufaka isehlukaniso. Ngaphezu kwalokho, isithiyo ku- inqubo yesehlukaniso kungaba abazali, abangane, umsebenzi, ngangizibuza kaningi, ukuzikhohlisa, nokunye.
Ezimweni ezinjalo, naphezu kweqiniso lokuthi kungaba nzima kakhulu, kufanele ufune usizo kusuka ingqondo. Uma ungeke ukwazi ukusindisa umshado, ke asikho isidingo uyephuza ekwenzeni izinqumo ezibalulekile. Ngokuvamile, izizathu isehlukaniso zingezokunikeza kwabesifazane nabesilisa ngokufanayo, kodwa isenzo esinjalo ephelezelwa eningi khonondo it ekuqaleni.
Uma umuntu ecabanga, "Ngifuna ukuba ilahle umkayo yami" - yayo kusukela isenzo esinjalo ngokuvamile uqhuba umkhuba, akungabazeki ukuthi womshado omusha kuyoba ngcono esamanje. Yena thukela Uzindla isici wezimali ka izinkinga zokuntuleka kwezindlu nokunye. N. Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi, uma kunezingane emshadweni, azigcina nomama wabo, okwenza kungabi nesidingo ukucabanga futhi nganeno umbuzo.
Uma owesifazane ukhuluma yedwa: "Ngifuna ukuhlukana nomyeni wakhe" - lokho ukungabaza echazwe ngenhla ungeze eziningi izingqinamba ezahlukene. Lokhu ukukhathazeka mayelana izingane, ingozi ayisekho ukushada, nokunye, nokunye okuningi.
Ngeshwa, akunakwenzeka ukuba anikeze iseluleko jikelele. Ngalinye lomkhaya ngalinye uma izinkinga ezithile zenzeka yezimanga uqhubeke khona ujabule, futhi amvimbe. Thola okungenani, isibonelo, isici esivamile futhi impikiswano ngokuthi ukuphinga. Kodwa kunezimo ezithile ukuthi ukubekezelela noma kunjalo akufanele kube. Futhi nakuba abaningi abazi ukuthi unqume ukuthi ufuna engasithola isahlukaniso, usazoba okuwukuphela kwendlela zokuxazulula izinkinga.
izizathu ezinjalo categorical ukuthi awukwazi nje sikhuthazele, kubandakanya lokhu okulandelayo:
1) udlame lwasekhaya: kungaba noma ngokomzimba (kushaywa) nezokuziphatha (kobushiqela);
2) izinkinga nge ukuncika utshwala noma izidakamizwa;
3) ukuqedela ukungavumelani ngokwengqondo.
Uma uhlangabezana izimo ezinjalo kungaba futhi kufanele uzame ukucela usizo, kodwa uma imiphumela ngeke, ukubekezelela lesi ngenxa izingane (yimbangela ejwayelekile kakhulu ukulondolozwa imishado enjalo) noma ngisho ngenxa yini enye - zingenzeki nhlobo. Kuyadingeka kakhulu ukuthola amandla ukuze wenze isinyathelo ekuphileni-ngokugomela ebalulekile njengoba isinqumo ema isihlangane isehlukaniso - ngezinye izikhathi ngendlela nje kuphela ukulondoloza ukuzethemba futhi bakhulisa izingane enempilo engenalo singofakazi bamanga ubudlelwane esekelwe ukuhlazeka futhi ngokungaqondi.
Vitamin U: lapho kuqukethwe? Izinzuzo Vitamin U, izakhiwo
Kungezwe abangane - kungani noma ubani
Njengoba cooler yezingane zingenza impilo yakho ibe lula futhi mnandi
Ukuhambelana ngesikhathi sokuzalwa komuntu: Aries futhi Libra